Ukuguqulwa kwamaSARM Ngezitaki Zokugcina Zama-SARM
I-Reflex Labs Beginner Muscle Stack
Ama-Reflex Labs Advanced Muscle Stack
I-Reflex Labs Mass Series 60 Amaphilisi
I-Reflex Labs Intermediate Cutting Stack
Reflex Labs Lesisemkhatsini Muscle Isitaki
I-Reflex Labs Shred Series 60 Amaphilisi
Amalebhu we-Reflex Beginner Cutting Stack
Ama-Reflex Labs Advanced Shredding Stack
Isitaki Sokulungisa Amalebhu we-Reflex
Isitaki Esihamba Phambili Sama-SARM Sokuqalisa Inguquko Yakho
Amathuba ukuthi, ufuna ukwenza konke ongakwenza ukufeza izinhloso zakho zokuzivocavoca futhi uthole ikhwalithi enhle yempilo. Lokho kusho ukudla, ukulala, nokuzijwayeza ukuthola imiphumela oyifunayo.
Lapho ubheka ukuguqula umzimba wakho ube ngumshini wokwakha izicubu zomzimba, udinga isitaki soguquko lwekhwalithi ephezulu. Ngezitaki Zenguquko ezivela eSitolo se-SARM, unganciphisa amafutha omzimba, engeza ngosayizi namandla, futhi uzizwe umuhle nsuku zonke.
Ziyini Izinqwaba Zenguquko?
Izinqwaba zenguquko zingamaqoqo ezithako ezenzelwe ukukusiza ekuguqukeni ngempumelelo. Zizosiza umzimba wakho ukuthi ungene esimweni esiphakeme ngokusiza ekuzuzeni kwemisipha nokulahleka kwamafutha. Izitaki zethu zenguquko zifaka ama-SARM amakhulu afana ne-Andarine, Ostarine, Ligandrol, Testolone, Cardarine, Ibutamoren, Yohimbine, nokuningi.
Asebenza kanjani ama-SARM
Njengenye indlela ephephile nengokomthetho kuma-steroid ekwakheni izicubu zomzimba, ama-SARM cishe akanayo imiphumela emibi futhi anikela ngemiphumela emihle kakhulu. Ama-SARM amele "i-androgen receptor modulator ekhethiwe." Lokhu kusho ukuthi amaSARM abopha ngokukhetha kuma-androgen receptors emisipheni nasemathanjeni akho kunokuba abophele kuma-receptors angafuneki njengezinwele namehlo. Ngenxa yokubopha okukhethiwe, ama-SARM anezela ukusiza ukukhulisa ukutakula kwakho nokusebenza.
Uzosebenzisa isitaki sakho soguquko cishe amasonto amane kuya kwayishumi nambili, kuya ngosayizi wakho, ubulili, nezinhloso zokuzivocavoca. Ngama-SARM, empeleni ungagcina izinzuzo zakho ngemuva kokuqeda umjikelezo wakho (inqobo nje uma uqhubeka nokudla, ukulala, nokuqeqeshelwa ukunakekelwa!)
Kwehluka Kanjani Izitaki Zenguquko Kweminye Imikhiqizo Yethu
Esitolo se-SARM, sinikela ngezithako ezahlukahlukene nezitaki zokulahleka kwamafutha, ukuzuza kwemisipha, kanye noguquko. Bahluke kanjani?
Okokuqala, kusetshenziswa ama-SARM ahlukahlukene ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene. Abanye bangcono ekusizeni abantu ekulahlekelweni kwamafutha (njenge-Stenabolic SR-9009) kanti abanye bahle kakhulu ekwakheni isisindo somzimba esinciphile (cabanga nge-Ostarine MK-2866). Ungakhetha ukugxila kokukodwa kwalezi zidingo, noma ungahle uthande ukuzenza ngasikhathi sinye — futhi kulapho kungena khona izitaki zenguquko!
Futhi okwesibili, izitaki zezithasiselo ezi-2 kuye kwezi-4 zizothuthukisa imizamo yakho ngaphezu kokuthatha ibhekwa eyodwa. Izithasiselo ngaphakathi kwesitaki soguquko zizosebenza ngokubambisana ukukhulisa imiphumela yakho futhi zikusize ugcine ukuzuza kwakho.
Ungasithola Kanjani Isitaki Esikahle Sezidingo Zakho
I-SARM ngayinye ifeza umsebenzi ohluke kancane ukuze ukwazi ukukhetha isitaki ngokuya ngokuthi ufuna ukuguqula kanjani umzimba wakho — noma ngabe ugxile kakhulu ekusikeni amakhilogremu ambalwa wokugcina amafutha, noma ngabe ufuna ukukhulisa ukuzuza kwemisipha yakho ngempela. Nayi eyethu khombisa izakhiwo nezimpawu zama-SARM ahlukile.
Sinikeza izitaki zokuqala, izitaki eziphakathi nendawo, nezitaki ezithuthukile ngokuya ngokuthi mangaki ama-supplements ahlukene ofuna ukuwathatha ngasikhathi sinye.
Noma ngabe iyiphi i-Transformation Stack oyikhethayo, qiniseka ukulandela imiyalo yokusetshenziswa kwayo! Ungadluli isilinganiso esifanele, futhi uqiniseke ukuthi ufaka isengezo empilweni enempilo, esebenzayo ngenkathi ulala kakhulu. Imiphumela izoba efanele!